Filôzôfia. Ny filôzôfia, avy aminny teny grika φιλοσοφία mid
ⓘ Filôzôfia. Ny filôzôfia, avy aminny teny grika φιλοσοφία midika fitiavam-pahendrena, dia taranja misy hatry ny Andro Taloha. Ny filôzôfia aminny ankapobeny, dia ..
Ny panteisma dia fampianarana filôzofika sady ara-pivavahana izay milaza fa ny fitambaran ny zava-drehetra dia Andriamanitra. Tsy mifangaro amin ny mônôteisma ny panteisma. Ny mônôteisma dia finoana ny fisianAndriamanitra tokana mpamorona izao tontolo kanefa tsy mifangaro amin izao tontolo izao fa sady ivelany sy amboniny no manana sitrapo azy manokana. Izany fampianarana ny amin ny panteisma izany dia efa niseho nanomboka tamin ny andron ny neôplatonisma nanomboka tamin ny taonjato faha-3 taor. J.K. Amin ireo filôzôfa neplatonisiana dia fisehoan Andriamanitra ny fomban ny olombelona sy ny ...
Ny natiora na fomba dia teny ampiasaina ao aminny teôlôjia kristiana, indrindra ao aminny firesahana momba ny Trinite sy ny kristolojia mba hanazavana ny maha Andriamanitra na tsia ani Kristy. Avy aminny teny latina hoe natura io teny io. Aminny teny grika dia ny hoe φύσις / phusis no mitovy hevitra aminio. Ny teny grika hoe phusis no tena ahazoana teny hafa iray tarika aminy, ka ireto ny ohatra aminizany: monofizisma na monofizitisma, miafizisma. Ny teny hoe natiora dia ampiasaina eo aminny fampianarana sy ny ady hevitra momba ani Jesoa mba hanavahana ny maha andriamanitra na tsia azy ami ...
Ny henôteisma dia fivavahana aminandriamanitra iray manokana nefa tsy mandà ny fisianny andriamanitra hafa na ny mety hisianny andriamanitra hafa. Ivavahana aminny fomba feno ilay andriamanitra nosafidina fa ireo andriamanitra hafa kosa mety tsy hivavahana mihitsy na hanaovana fivavahana faranizay maivana. Ny teny hoe henoteisma dia avy aminny fitambaranny teny grika hoe ἑνός θεός / henos theos, izay midika hoe "andriamanitra iray". Tsy afangaro aminny mônôteisma ny henôteisma.
Ny empira na ampira dia fanjakana manana ny fiandrianany mampiray fanjakana sy vahoakam-pirenena amin ny alalan ny fahefana tokana iraisana tsy miankina amin ny fahefana hafa na ara-pôlitika na ara-pivavahana, izay matetika tapahin ny atao hoe "emperora" na "mpanjakan ny mpanjaka". Hatramin ny nisiany ka hatramin ny fiafaran ny taonjato faha-19, ny hoe "empira" dia rafitra manambara fanjakana maro mahafaoka ny tontolo fantatra, araka ny môdelin ny Empira Rômana sy ny Pax Romana "fiadanana rômana". Izany hevitry ny hoe "empira" izany dia nanjaka tao amin ny filôzôfia pôlitika – hatramin i D ...
Ny filôzôfia, avy aminny teny grika φιλοσοφία midika "fitiavam-pahendrena", dia taranja misy hatry ny Andro Taloha.
Ny filôzôfia aminny ankapobeny, dia ny fandinihana ny fototrolana, toy ny antom-pisianny tena, ny fahaizana, ny soatoavina, ny fahendrena, ny fisainana ary ny fiteny.
1. Sampanny filôzôfia
Ny sampana manaraka eo dia fandinihana lehibe indrindra ao aminny filôzôfia:
Ny filôzôfia ara-môraly dia ny fandinihana ny fomba fitondran-tena eo anivonny fiaraha-monina sy mandinika manokana ireo tsara tokony hatao sy ireo ratsy tsy tokony hatao. Manakaiky be azy ity moa ny atao hoe etika.
Ny metafizika, dia ny fandinihana ny fihavianny zava-misy, miaraka aminny fifandraisana eo anivonny saina sy ny vatana ary ny zava-mitranga. Ny sampana tsotra dia ny kôsmôlôjia, ary ny ôntôlojia.
Ny filôzôfia pôlitika dia ny fandinihana ny governemanta sy ny fifandraisanny tsirairay na fianankaviana aminny fikambanana ao aminny firenena. Ao ny fanontaniana mahakasika ny fanamarinana, any lalàna, ny fananana, ary ny zo sy ny adidinny olom-pirenena. Samy mifandray ny politika sy ny etika, ary miadihevitra aminny hoe inona ny tsara sy ny ratsy ary ahoana ny mponina no tokony hiaina ny foto-panontanianireo zana-tsampana roa ireo.